भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो
फेरि अकस्मात प्रमिलाले हिरासतबाटै पूर्व पति सन्तोषलाई यस्तो खबर पठाएपछि… भेट्न मन होला त? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । चितवनमा केही समय चर्चित भएको सन्तोष र प्रमिलाको घटनामा फेरी ट्वीष्ट आएको छ । विदेशमा कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर अर्कैसंग गएकी प्रमिला र उनका प्रेमी अहिले हिरासतमा छन् । ३५ दिन पछि फेला परेकी प्रमिला वर्दियाको अर्का ब्यक्तिसंग एउटा कोठामा फेला परेकी थिइन् । साउदीमा काम गरेर कमाएको
प्रहरी चौकीबाटै आस्थाले भनिन् – सजाय भोग्न तयार छु ! थु नामा राख्न लगियो सिडियो कार्यालय (भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी गायिका आस्था राउतले कानूनभन्दा माथि कोही नभएको बताएकी छन् ।कानूनलाई ‘कोअ प रेट’ गर्न नै आफू प्रहरीमा उपस्थित भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन, म पनि छैन । कानूनका हिसाबले जे मलाई हुन्छ, त्यो सहर्ष स्वीकार गर्छु ।’ यस्तै कलाकार आस्था राउतमाथि
काठमाडौं, १३ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरु पार्टी कार्यालयमै कुुटा कुुटमा उत्रिएका छन् । सोमबार (आज) दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा विद्यार्थी नेताहरुबीच झडुप भएको हो । पार्टीको संस्थापन पक्षले विधान विपरित नेविसंघको नेतृत्व चयन गर्न लागेको भन्दै विुरोध प्रदर्शन गरिरहेका महासचिव कुन्दनराज काफ्लेमाथि
काठमान्डौ , आफ्नै विवाहको निम्तो बाँड्ने क्रममा दु’र्घटनामा ज्या’न गु’माएकी रमिता भट्टको वि’योगमा उनको परिवार मात्र हैन धेरैको आखा रसाएका छन । मन रोएको छ ।रमितालाई गु’माउदा उनको पिरिवार बि’क्षिप्त बनेको छ।शो’क मा डु’बेको छ । विहिवारबाट नै प्रकाशले फेसबुकमा थरी थरीका स्टाटस लेखेर दुनियाँलाई रुवाएकाे छन् । उनले लेखेका
घर छाडेर भागेकि सिम्रन पाैडेलकाे फर्किइन्.. पहिलाे पटक मिडियामा आएर यस्तो दिईन सबै जवाफ (भिडियो सहित)
माघ १३, काठमाडौं । चितवनमा भएको घटना सन्तोश सुनार र पर्मिला सुनारको कहानी टुङ्गो नलाग्दै नयाँ घ’टना सार्वजनिक भएको छ। भरतपुर7बस्ने सिमरन पौडेल टिकटक बनाउन नपाएको भन्दै सामान्य झ’गडा हुँदा घरनै छोडेर आज १७ दिन देखि बे’पत्ता रहेकी थिइन । चितवनका एक युवक टिकटककै कारण रुँदै मिडियामा आएका
पोखरामा पनि अर्को घटना: २ छोरा छोडेर लक्ष्मी टाप, श्रीमान् रुदै मिडियामा कल डिटेलमा देखियो यस्तो (भिडियो)
माघ १३, पाेखरा । लक्ष्मी परियारले आफ्ना नाबालक दुई छोराहरु फूपूकोमा पठाएर आफू बेपत्ता भएकी छन् । बाग्लुङ घर भई पोखरा महानगरपालिका १७ घारीपाटन बस्दै आएकी लक्ष्मी नेपाली गत माघ १ देखी बेपत्ता भएकी हुन् । श्रीमान् दलबहादुर बैदेशीक रोजगारीको क्रममा दुबई थिए । पौषको अन्तिम दिन दुई छोराहरुलाई फूपूको
श्रीमानले बिदेशमा कमाएको सम्पत्ति लिएर हिडेकि अनुपाले नकुललाई उल्टै अ’श्लिल बोलेपछि छिमेकी आए मिडियामा (भिडियो हेर्नुस् )
काठमाडौँ- पछिल्लो समय तनहूँको भानु ९ मा नकुल र अनुपाको बिषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा टिका टिप्पणी भएका छन् । करिब १३ बर्ष विदेशी भूमीमा आफ्नो पसिना बगाएर जोडेको सबै सम्पती लिएर श्रीमती अनुपा अधिकारी अर्कैैसंग हिडेपछि नकुलले न्यायका निमित्त गुहार मागेका छन् । दुई नाबालक छोरीहरु समेत लिएर केही महिना
दुलही बन्नू पर्ने रमिता ला:श बनिन, उनको घर पुग्दा देखियो यस्तो हृदय विदारक दृश्य (भिडियो हेर्नुस्)
admin January 26, 2020 भिडियो, समाज	0
माघ १३ कञ्चनपुर । यही माघ १३ मा हुने आफ्नो विवाहको निम्ता साथिहरुलाई बाँडन हिड्दै गर्दा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका ४ की रमिता भट्टलाई टिपरले ठ क्क र दियो । डेढ वर्ष अघि परिवारसंग विद्रोह गरेर प्रेमीसंग बस्दै आएकी उनलाई अहिले माइतीले पनि स्वीकार गरेपछि उनको खुसी दुई गुना भएको थियो
काठमाडौं । पछिल्लो समय तनहूँको भानु ९ मा नकुल र अनुपाको बिषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा टिका टिप्पणी भएका छन् । करिब १३ बर्ष विदेशी भूमीमा आफ्नो पसिना बगाएर जोडेको सबै सम्पती लिएर श्रीमती अनुपा अधिकारी अर्कैसंग हिडेपछि नकुलले न्यायका निमित्त गुहार मागेका छन् । तर यता अनुपाको अडियो भने सार्वजनिक
सभामुख बन्दै गरेका अग्नि सापकाेटाका बारे राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पाैडेलले गरे यस्तो खुलाशा! (भिडियाे हेर्नुस्)
admin January 26, 2020 अन्तर्वार्ता, भिडियो, समाचार	0
यतिबेला नेपालको राजनैतिक परिवेश विभिन्न कारणहरूले तातिएकाे छ । नेपालमा विभिन्न काण्डहरू घटिरहेका बेला फेरि नेपालमा भएकाे केहि राजनैतिक घटनाक्रममा विश्लेषकहरूले विभिन्न् कोणबाट बिश्लेषण गरिरहेका छन् । मुख्यतय यतिबेला सभामुखको बिषयलाइ लिएर विभन्न आँकलनहरू गरिएकाे छ । नेपालका सभामुख कृष्णबहादुर महारा रोशनी काण्डमा परेपछि बला त्कार घटनामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा